Na mpitia soavaly maniry fatratra mitaingina soavaly ianao, na orinasa mitady traikefa fananganana ekipa misy fahasamihafana, Abbeyfield Farm dia manana izay ilainao rehetra.
Miorina amin'ny velarantanin'i Kildare Abbeyfield Farm, manodidina ny 240 hektara tsara tarehy, dia mpitarika ao amin'ny firenena Irelands. Ny mpitsidika dia afaka manandrana ny tanany amin'ny fitifirana voromailala, ny zana-tsipìka, ny basim-borona kendrena ary ny mitaingina soavaly. Na mpanao famantaranandro voalohany na nahavita zavatra bebe kokoa ary mitady fanamby dia eo an-tanana ireo mpampianatra mpanazatra mba hahazoana antoka fa manararaotra ny fitsidihanao ianao.
Avelao izahay hampiseho aminao ny ambanivohitra Kildare amin'ny fomba tsara indrindra, miverina amin'ny soavaly. Ho an'ny mpankafy mitifitra, mpanafika vao manomboka na efa za-draharaha, ny toetoetranay eo amin'ny sehatry ny zavakanto dia mifanaraka amin'ny filanao miaraka amina saram-pianarana manam-pahaizana.
Latsaky ny 20 minitra avy eo amn'ny fiara M50 an'i Dublin, tongasoa ny famandrihana orinasa sy ny vondrona. Ilaina ny famandrihana.
Adventure sy hetsika, Outdoors, Kildare mpitaingin-tsoavaly, Fianakaviana ankohonany, Clane
Clane, County Kildare, Irlandy.